Fantsom-bokatra plastika, fitoeram-bokatra fitehirizan-javatra, fitoeram-bokatra plastika - Guanyu
Mpamatsy vola nasionaly ho an'ny fikirakirana sy vahaolana amin'ny fitehirizana fitaovana.
Fitaovana fitoeran'entana, fonosana ary valizy
Ny orinasan'ny Global 500 dia mifidy an'i Guanyu ho mpiara-miasa aminy
Midira amin'ny indostrian'ny fitahirizana plastika mihoatra ny 24 taona
Mahazo patanty 45 sy 5 ho an'ny famoronana
ISO 9001,14001,45001 voamarina; REACH, ROHS, FDA
Mampiasà fitaovana azo averina miverina 100% ho an'ny plastika.
Ny fitsidihan'ny mpanjifa ny fitsidihana an'i Guanyu dia mino foana fa ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia manan-danja toy ny fiainana. Androany, manara-maso ny kalitaon'ny vokatra izahay ho an'ny Liqun Pharmaceuticals. Nanadihady ny momba ny laharana voalohany izahay ...
Ahoana ny fomba hisafidianana tur ...
Ny boaty fanodinam-bola dia mitana andraikitra lehibe amin'ny indostrian'ny fanodinam-bola sy ny lojika. Ny boaty turnover dia afaka miara-miasa amin'ny kaontenera sy ny toeram-piasana tena manampy ny orinasa hamita t ...
Ny anjara asan'ny turnove plastika ...
Ireo sobika fihodinana plastika avo lenta dia vita amin'ny polypropylene akora vaovao. Tsy misy poizina izy ireo ary tsy manimba ary tsy handoto ireo legioma. Diovina ara-potoana izy ireo mba hitazomana ny ...
Fametrahana fantsom-pifidianana, Tranon-tahiry azo itehina, Stack & Hang Bins, Bins fitehirizana plastika azo stackable, Fametahana fitoeram-bokatra, Tavoahangy plastika mifatotra,